ụgbọ njem | Otu Di na Nwunye
April 11, 2018 + Bonaire, Di na Nwunye, England, Europe, France, Njem njem, Transportation, Eme njem, Nhazi njem
February 3, 2018 + Europe, Transportation, Nhazi njem, United Kingdom
Ụgbọ njem London: Otu esi enweta gburugburu London, England
N'oge na-adịbeghị anya, anyị nwere enyi na-ajụ anyị maka aro ole na ole na njem njem London. N'ịche na ọtụtụ nwere ike ịjụ otu ajụjụ ahụ, ekpebiri m ịme ka mpeepe banyere ya! London dị nnọọ mfe ịkwọ ụgbọ mmiri, na-ekele ọtụtụ ụdị ụgbọ njem gụnyere ụlọ ndị ojii, ụgbọ oloko, ụgbọ okporo ígwè na-emeghe na London Underground (nke a na-akpọ "Tube"). Ọ bụrụ na ị na-efega na London, ị ga-abịa site na otu ... GỤKWUO
Na-egwu egwu n'èzí
Ekeme ndidi akpatre utom emi ama okpu n̄kpọ. Ma eleghị anya, ị nwere oge buru ibu, mana enweghi pizzazz ị na-achọ, ma ọ bụ ikekwe enweghi ohere isoro ndị obodo gị na-emekọrịta ihe n'ụzọ dị mma n'ụzọ ị ga-amasị. Ihe anyị niile na-achọ mgbe anyị na-eme njem, n'ezie, bụ ahụmịhe njikọ. Nke a bụ ihe mere e nwere otu ihe anyị na-agbalị na ... GỤKWUO